Nguva yekuverenga: 5 maminitsi(Last Updated On: 27/03/2020)
zvisinei, iyo nzira yokufambisa zvakanaka? pa Save A Train, tiri Chokwadi norusaruro uye vanofunga kuti chitima kufamba ari nokure vane mhando chokufambisa! Verenga pamusoro pazasi kuti uzive zvinhu nani uye ngatitaurirane svetuka kupinda pambiru yedu nechitima kufamba maringe ndege pakufamba.
No paine kupikisana kwakadaro
Air kufamba anozivikanwa kuti mumwe uchitsanya nzira kusvika kwauri kuenda, zvisinei, izvi chete kutora ndege pacharo nezvezvinhu. How kure mberi kutiza kwenyu here kuti usvike kuyambuka refu Check-uye vakachengeteka mutsetse? Kana akadzivisa muhomwe unofanira kumirira kuunganidza ichi kana wasvikapo - nguva ino unoparadza. Kusiyana dzendege, panguva chitima dzemapurisa hapana cheki-dzi kana kuchengeteka mitsetse, saka haufaniri kuva pachiteshi maawa pamberi penyu rwendo. Most zvikuru chitima dzemapurisa dziri kurudyi mumwoyo mumaguta dzavanogara. Mostly kana iwe utore chitima, wasvikako zvakananga panguva yenyu kuenda. zvisinei, achitora ndege, unogona kupedza maawa kusvika uye kubva yendege.
Kutoti iwe mari yebhizimisi kirasi, nzvimbo yako Kazhinji kukunyimai pamusoro ndege chigaro. On chitima, unogona kufamba akasununguka, uye uchava nezvakawanda legroom kumativi zvigaro zvenyu. Panguva kutiza kwenyu, unofanira kumirira chigaro bhandi chiratidzo kudzima kutama chigaro chako. zvisinei, muchitima watama pasi mberi nokudzoka shure, ichitora nokuruma kana kofi, uye uchiona nyika rinopfuura. A yevedza chitima tasva kunogona kuva zororo. Most European trains also offer free WiFi – something which cannot be yet said for all Airlines.
Dzidzisai kufamba inokupai waizoenda vakasununguka wako akanamata dzinovaraidza. vazhinji dzinovaraidza havasi wakanyatsokodzera nendege nokuda utano, zera kana erudzi.
vakatakurwa pamusoro European nezvitima anogona kutora imbwa, katsi nedzimwe mhuka diki navo vakawanda nguva hapana imwe mari!
Kuti uwane mamwe mashoko, Follow Save A Train on Facebook, Instagram Account uye Twitter Accounts.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-travel-versus-plane-travel%2F - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Chitima Kufamba, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Rovedza Kufamba Matipi, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Chii Kuti Kuziva About The Railway Ticket Reservation